အဖေ့နောက် မိန်းမ – Hlataw.com
အဖေ့မိန်းမ မိထွေးချောချောလေး ဒေါ်ကေသွယ် လဲ အလွန်အမင်း ဆန္ဒတွေ ပြင်းပြပြီး ထကြွသောင်းကျန်းနေခဲ့ရတာ ကြာပြီ ဆိုတော့ သိဒ္ဓိ လို တာဝန်ယူ ပေးမဲ့ အား ကောင်းမောင်းသန် လုပ်နိုင်ကိုင်နိုင်သူ နဲ့ တွေ့သောအခါ အားရပါးရ ကုန်းလေပြီ ..။ သိဒ္ဓိ မှာလဲ အင်မတန်မှ တပ်မက်စရာကောင်းနေတဲ့ မိန်း မလှတယောက် နဲ့ အိမ်တမိုးအောက်ထဲ နီးနီးစပ်စပ် နေနေရလို့ နိုးကြားဖေါက်ပြန်နေသော သူ့ကာမစိတ်တွေ ကို ဒေါ်ကေသွယ် နဲ့ ငြှိမ်းသပ်ပစ် သည် ..။သူထင်တာက ချိုချိုအောင်ဆွေ နဲ့ ဒေါ်ကေသွယ် တို့ နဲ့ အားရအောင် ဖြုတ်လိုက်ရင် အဖေ့မိန်းမ မိထွေးချောချောလေး ကို ဖေါက်ပြန်ဖြစ်မှာ မဟုတ်တာ့ဘူး ..လို့ ..။ …… သိဒ္ဓိ လဲ သူ့အဖေ ရဲ့ အိမ်ရောင်းဝယ်ရေး လုပ်ငန်းတွေ ကို တဖြေးဖြေး နဲ့ ကျွမ်းကျင်လာ သည် ..။ သင်တန်းတွေ လဲ သူ့အဖေက တက်ခိုင်း သည် ..။ ချိုချိုအောင်ဆွေ ..မာယာထွန်းနောင်..သရီဆာတို့နဲ့ အတူတူ လုပ်ကိုင်ရ သည် ..။ မိန်းမတွေ နဲ့ နီးနီးကပ်ကပ်နေ ရ လုပ်ရ လို့ သူတို့ကို ကြည့်ပြီး စိတ်တွေ ဖေါက်ပြန် မိတာက အကြိမ်ကြိမ်ဘဲ..။ ချိုချိုအောင်ဆွေ နဲ့ကတော့ လုပ်နေကျ ဖြစ်လို့ ကြုံရင် ကြုံသလို သူလိုချင်ရင်လဲ ကိုယ်ပေး..ကိုယ်လိုချင်လဲ သူပေး .. ဖြုတ်ဖြစ် လုပ် ဖြစ်ကြ သည် ..။
အခုနောက်ပိုင်း သိဒ္ဓိ အလုပ် ကျွမ်းကျင်လာပြီး နောက်ပိုင်း သူ့ကို သင်ပြပေးဖို့ မလိုတော့တာကြောင့် အိမ်ဝယ်လိုသူတွေကို အိမ်လိုက်ပြတဲ့အခါ..နှစ်ယောက်အတူတူ သွားဖို့ မလိုအပ်တော့ ..။ ဒါပေမဲ့ ဒီနေ့ သူ အိမ်တလုံး လိုက်ပြနေတုံး ..မာယာထွန်းနောင် သူ့ကို ဖုန်းခေါ် သည် ..။ သူ လက်ရှိပြနေတာ ပြီးသွားရင် ခဏ လာနိုင်မလား…တဲ့ ..။ အကူအညီ လိုနေလို့ တဲ့ ..။ သူလဲ မာယာထွန်းနောင် ရောက်နေတဲ့ လိပ်စာ ကို မေးပြီး လာခဲ့မယ် လို့ ပြောလိုက် သည် ။ သူပြတဲ့ ကိစ္စ လဲ ပြီးသွားတာမို့ ဂျီပီအက်စ် နဲ့ မာယာထွန်းနောင် ရောက်နေတဲ့ နေရာ ကို သူ သွားလိုက် သည် ..။ မာယာထွန်းနောင် ရှိနေတဲ့ အိမ်ကြီး မှာ မာယာထွန်းနောင် ရဲ့ ကားလေးတစီးဘဲ ရပ်ထားတာ တွေ့ သည် ..။ အိမ်ဝယ်သူ ရဲ့ ကား မတွေ့..။ တခါတလေ အိမ်ဝယ်သူ က လိုက်ပြသူ အိမ်ပွဲစား ရဲ့ကားနဲ့ဘဲ လိုက်လေ့ရှိတတ် သည် ..။အိမ်တံခါးမကြီး က စေ့ရုံတင် စေ့ထား သည် ..။ သူအထဲရောက်တော့ မာယာထွန်းနောင် သူဝင်လာတဲ့ အိမ်ရှေ့တံခါးပေါက်ဘက် ကို လျောက်လာတာ တွေ့ရ သည် ..။ “ အိမ်ကြည့်ချင်တဲ့ လူတွေကော..ပြန်သွားပြီး.ဒီမှာ မမာယာ လိုချင်တဲ့ သော့တွဲတွေ ..” “ အိုး..ကျေးဇူးကမ္ဘာဘဲ..အိမ်ကြည့်ချင်တဲ့ လူတွေ ပြန်သွားပြီ..သူတို့က အိမ်အနောက်ဘက်မှာ သစ်ပင်အမြင့်ကြီးတွေ ရှိတာ မကြိုက်ကြဘူး.. ထပ်ရှာအုံးမယ် ..တဲ့ ..” မာယာထွန်းနောင် သည် အသားပျော့ ကိုယ်လုံး နဲ့ ကပ်နေတဲ့ စကပ် နဲ့ ဘလောက်စ် ကို ဝတ်ထား သည် ..။ ကိုယ်လုံးအလှ က သိသိသာသာ ပေါ်လွင်နေ သည် ..။ “ မမာယာ ဘာလိုသေးလဲ …” သူ မကြည့်မိအောင် မျက်စိလွှဲပြီး မေး သည် ..။
“ ဘာလဲ..ကိုသိတ် က ပြန်တော့ မလို့လား …” “ ကျနော်လဲ မနက်ထဲက တခုပြီးတခု လုပ်နေတာ ခုထိ အစားမစားရသေးလို့ ..” “ မာယာ လဲ ဒီလိုပါဘဲ ..ဘာမှ မစားရသေးဘူး ..ကိုသိတ် နဲ့ အတူတူသွားစားမယ်လေ ..ဘာစားချင်လဲ ..” “ ရတယ်..နေပါစေ ..ကျနော် က ဖြစ်သလိုဘဲ ..လွယ်တာ စားလိုက်မှာပါ ..” “ မာယာကရော ခက်တာ စားမှာမို့လား ..လာပါ..အတူတူ သွားစားရအောင် …” “ နေပါစေ ..ကျနော် သွားလိုက်အုံးမယ် ..ရုံးမှာ ပြန်တွေ့မယ် လေ ..” သိဒ္ဓိ အိမ်ထဲက ပြန်ထွက်ဖို့ လုပ် သည် ..။ မဖြစ်ဘူး ..။ ပြေးမှ ..။ မာယာ စက်ကွင်း က ပြေးမှ ..။ မာယာထွန်းနောင် ရဲ့ အလှက သူ့ကို ဖမ်းစား နေ သည် ..။ တခြားဆော် ဆို လင်ရှိမိန်းမ လဲ သူက ဂရုမစိုက် ..။ ငရဲတွေ ဘာတွေ လဲ မယုံဘူး …။ အခုဟာက ကိုယ့်အဖေ ရဲ့ မိန်းမ ..မိထွေး ..။ လုံး၀ မဖြစ်သင့်ဘူးလေ ..။ “ ကိုသိတ် …” သူ့ကို အနောက်က လှမ်းခေါ်လိုက်တဲ့ မာယာ့အသံက နဲနဲ ကျယ်ပြီး မာသလိုဘဲ ..။ သူခြေလှမ်း တုံ့နှေးသွားရာက အနောက်ကို လှည့်ကြည့်မိ သည် ..။
“ ကိုသိတ် ကို မာယာ မေးမယ် ..ကိုသိတ် မာယာ့ကို ဘာလို့ ရှောင်ဖယ်ဖယ် လုပ်လုပ်နေတာလဲ …” “ မလုပျပါဘူး ..မမာယာ..” “ မမာယာ လို့ မခေါ်နဲ့..မာယာလို့ဘဲ ခေါ်…မာယာ က ကိုသ်တ်ထက် အသက် ငယ်တယ် ..” “ဟို..ဟို ..မာယာ က ..” “ ဘာလဲ ဖေဖေ့မိန်းမ မို့လို့ ပြောမလို့ မဟုတ်လား ..ဒီမှာကိုသိတ် ..မာယာ့ကို ဒီလောက် လဲ ကြောက်မနေပါနဲ့ ..ဘာလို့ ထွက်ထွက် ပြေးနေ ရတာလဲ ..လာ..ဒီကို …” ဆရာမ တယောက် က ကျောင်းသားလေးတယောက် ကို ခေါ်သလိုမျိုး မာယာထွန်းနောင် က ခေါ် သည် ..။ သူ သည် ကျိုးနွံစွာ နဲ့ မာယာထွန်းနောင် ရဲ့ အမိန့်ကို နာခံ သည် ..။ သူမရှေ့ကို သွားလိုက် သည် ..။ တခါက စန္ဒရားတီးပြီး သူမ ဆိုပြဘူးတဲ့ ကျော်ဟိန်း ရဲ့ သီချင်း အမိန့် ကို သတိရမိသွား သည် ..။ “ ကိုသိတ်..မာယာ့ ကို မစိမ်းပါနဲ့ကွာ..ကိုသိတ် ရှောင်ရှောင်နေတာ မာယာ သိတယ် …” လို့ ပြောရင်း သူ့ကို တင်းတင်းကျပ်ကျပ်ကြီး ဖက်လိုက်ပါ သည် ..။
သိဒ္ဓိ ရဲ့ ရင်ဘတ်နဲ့ မာယာထွန်းနောင် ရဲ့ ရင်သားစိုင်တွေ တသားထဲ ကျအောင် ပူးကပ်မိသွားရ သည် ..။ မာယာ က..” ပြန်ဟာ့ဂ် လုပ်လေ..ဘာလဲ ..စိမ်းကားတာလား ..” လို့ ပြောလို့ သူမကို လဲ ပြန်ဖက်လိုက်ရ သည် ..။ မာယာထွန်းနောင် ရဲ့ ရေမွှေးနံ့သင်းသင်း က သူ့ကို ယစ်မူးစေ သည် ..။ အထိအတွေ့တွေကလဲ သူ့စိတ်တွေ ကို ဟုန်းကနဲ ထကြွစေ ပြီ ..။ မျက်နှာချင်း က လက်သုံးလုံးခန့်အကွာဘဲ ဝေးတော့ သည် ..။ ဖူးတင်းနေတဲ့ နှုတ်ခမ်းတွေ နဲ့ သူ့နှုတ်ခမ်းတို့ ဘယ်လို ဘယ်လို ထိကပ်မိ သွား ကြသလဲ မသိဘူး ..။ အတင်းကြီး ပြန်ဆုတ်ဖို့ ကြိုးစားပေမဲ့ မာယာ့ဘက် က သူဆုတ်တာကို ခွင့်မပြုဘူး ဖြစ်နေ သည် ..။ သူ့ကျောပြင်ကို တင်း ကျပ်စွာ ဖက်ထား သည် ..။ အိပ်ချင်ယောင်ဆောင်နေတဲ့ ကျား ကို လာနှိုးနေသည် ..။ မာယာ့နှုတ်ခမ်းဖူးဖူးအိအိတွေ ကို စုတ်နမ်းမိပြီ ..။ ချိုမြိန်တဲ့ အနမ်းတွေ က စမိလိုက်သောအခါ ရပ်ဖို့ မလွယ်ကူလှ ..။ သိဒ္ဓိ ရဲ့ ကျောပြင်ကို မာယာ က သူမ လက်သဲချွန်တွေ နဲ့ အားမလို အားမရ ကုတ်ခြစ်ရင်း သူမလျာကို သိဒ္ဓိလျာ နဲ့ လုံးထွေးကစား သလို သိဒ္ဓိ ရဲ့ လက်တွေကလဲ မာယာ့ကျောပြင်ကို ဖက်ထားရာက အောက်ဖက် ကို ရွေ့လျားဆင်းကျသွားပြီး အင်မတန်မှ လှသော စွင့်နေတဲ့ တင်စိုင်တုံးတွေကို ဆုတ်နယ် နေ လေ သည် ..။
အသက်ရှုသံတွေ ပြင်းထန်လာကြပြီး နောက်တဆင့်ကို တက်လှမ်းမဲ့ အနေနဲ့ မာယာ သည် သိဒ္ဓိ ရဲ့ ပေါင်ကြား ကို သူမ လက်ကလေး နဲ့ကိုင်တွယ်လာတဲ့ အချိန် မှာ တစ်တစ်တစ်တစ် နဲ့ မာယာ့ ဖုန်းလေး က မြည်လာ သည် ..။ မာယာ သည် ဖုန်း ကို လျစ်လျူရှုထားပြီး ဆက်လက်ပြီး နမ်းစုတ်နေရင်း လက်တွေ က တစုံတရာ ကို ရှာဖွေနေသလို ပေါင်ကြားမှာ ပွတ်သပ်နေ သည် ..။ ဖုန်း က ဆက်တိုက်ဘဲ တစ်တစ်တစ်တစ် နဲ့ မြည်နေ သည် ..။ နှုတ်ခမ်းချင်း ဖတ်ကနဲ ကွာသွား သည် ..။ မာယာ ဖုန်း ကို ကောက်ယူလိုက် သည် ..။ ကော်လာအိုင်ဒီမှာ ဦးပန်းအောင် ရဲ့ နံပါတ် ကို တွေ့လိုက် သည် ..။ နိမ့်ချီမြင့်ချီ ဖြစ်နေသော ရင်တွေ ကို သူမ လက်လေးနဲ့ ဖိရင်း ဖုန်းထူးလိုက် သည် ..။ “ ဟလို ..ကိုကြီး ..ဆောရီးဘဲ..မာယာ ရေချိုးခန်း ဝင်နေတာ..ဖုန်းက အပြင်မှာ ကျန်ခဲ့နေလို့ ..” “ ရတယ်..မာယာ ..ကိုကြီး အလုပ်ပြီးသွားလို့ မာယာ နဲ့ တခုခု သွားစားမလားလို့..မာယာ ဘယ်မှာလဲ ..ဟို ..အုတ်က်ဗဲလီး ရပ်ကွက် က အိမ် မှာလား ..” “ ဟုတ်တယ် ..ကိုကြီး ..ကိုကြီး က ဘယ်မှာ စားချင်လဲ ..” “ မာယာကြိုက်တဲ့ ..ကိုကြီးတို့ ရုံးနားက ဗီယက်နမ်ဆိုင် မှာ စားမလား ..ဒါနဲ့ သားရော ဘယ်ရောက်နေလဲ မသိဘူး ..သူ့ကိုလဲ ခေါ်လိုက်ပါလား ..” “ ဟုတ်ကဲ့ကိုကြီး..မာယာ ခေါ်လိုက်မယ် လေ ..” မာယာထွန်းနောင် သည် ဦးပန်းအောင် နဲ့ ဖုန်းပြောနေချိန် သိဒ္ဓိ ပေါင်ကြား က မာကျောထွားတက်လာ သည့် အချောင်းကြီး ကို ဘောင်းဘီ အပေါ်ကနေပြီး ကိုင်တွယ်ပွတ်သပ်နေ သည် ..။
ဖုန်းချလိုက် အပြီး သိဒ္ဓိ ရဲ့ ဘောင်းဘီဇစ်ကို မာယာ ကိုင်လိုက်သောအခါ သိဒ္ဓိ သည် ..“မာယာ.. အဖေ ထမင်းစားဖို့ စောင့်နေအုံးမယ် ..” လို့ ပြောကာ ရုန်းဖယ်လိုက် သည် ..။ “ မာယာ့ကို မစိမ်းနဲ့နော် ..” “ အင်း ..” “ ထမင်း လိုက်စား ..” “ မစားတော့…” “ ရှူး..တိတ်..လိုက်စား ..စကားနားထောင်ကွာ..” မာယာ့ပုံစံလေး က အရမ်းချစ်စရာ ကောင်းနေ သည် ..။ သိဒ္ဓိ ကားမောင်းနေရင်း ..စောစောက မာယာ နဲ့ ဖြစ်ပျက်သွားခဲ့တာတွေ ကြောင့် စိတ်လှုပ်ရှားနေဆဲ ဘဲ ..။ သူ ရှောင်ပေမဲ့ မာယာက အတင်း တိုးလာ သည် ..။ ယုန်ကမတိုး..ပိုက်ကတိုး ဆိုတဲ့ဟာမျိုး ..။ မိန်းမတွေ နဲ့ အတွေ့အကြုံများလှသော သူ သည် မာယာ နဲ့ ပတ်သက် လာသောအခါ အတွေ့အကြုံ မရှိသေးတဲ့ လူပျိုသိုးလေး တယောက်လိုဘဲ ဖြစ်ခဲ့ရ သည် ..။ ခိုးစားတဲ့ အသီးမို့ ပိုချိုတယ် ဆိုတာမျိုး..တာမြစ်ထား တာကို လုပ်လို့ စိတ်တွေက တအား တုန်လှုပ်..လှုပ်ရှားနေသည် ထင်မိ သည် ..။ သူကိုင်ညှစ်ဆုတ်နယ်မိ၇တဲ့ မာယာ့တင်ပါးတွေ ရဲ့ အတွေ့အထိ ကို သူ ပြန်လည် ခံစားနေမိတုံးဘဲ ..။ ဒီတင်ပါးကြီးတွေ ကို သူ စတွေ့ခါစကထဲက တပ်မက် ပြစ်မှားနေခဲ့မိရတာ မဟုတ်လား ..။ စိတ် နဲ့ ပြစ်မှားနေခဲ့မိတဲ့ ဒီတင်ပါးကြီးတွေ ကို အားပါးတရ ဘဲ ကိုင်ဆုတ်မိခဲ့ သည် ..။
အင်း .. မာယာ ကလဲ သူ့ပစ္စည်း ကို ဘောင်းဘီ အပေါ်ကနေ ဆုတ်ကိုင် ခဲ့ သည် ..။ အဖေ့ဆီကသာ ဖုန်းမလာခဲ့ရင်..မာယာ နဲ့ သူ နောက်တဆင့် ကို တက်ကြမှာ သေချာ သည် . .။ အင်း ..အခုလဲ ထမင်း အတူတူ စားတဲ့အခါ အဖေ နဲ့ ဘယ်လို မျက်နှာချင်း ဆိုင်ရမှန်းတောင် မသိတော့ဘူး . ။ အလုပ်က အပြန် အိမ်ပြန်ရောက်ကြတော့ တနေကုန် အလုပ် ပင်ပမ်းကြပြီး ဘာမှ ချက်ပြုတ်ချင်စိတ်လဲ မ၇ှိကြတော့တာကြောင့် မာယာ က အပြင်ကဘဲ မှာစား မည် လို့ ပြော သည် ..။ သူတို့နားမှာ မကြာခင်ကမှ ဖွင့်သော မြန်မာစားသောက်ဆိုင် ကို သတိရကြပြီး မာယာ က ဖုန်း ဆက်ပြီး စားလိုတာများ မှာ သည် ..။ ဦးပန်းအောင် က ငါးခူကို ခရမ်းချဉ်သီး နဲ့ချက်တဲ့ ငါးဟင်း မှာသလို မာယာ က နန်းကြီးသုတ် နဲ့ ကြာဇံ ဟင်းခါး မှာ သည် ..။ သိဒ္ဓိ ကို မာယာ က ဘာစားချင်လဲ လာမေး သည် ..။ သိဒ္ဓိ လဲ ဘာဘဲ ဖြစ်ဖြစ် လို့ ပြောလို့ မာယာ က ဆိတ်သားဟင်း နဲ့ ချဉ်ပေါင်ဟင်း မှာပေး သည် ..။ မြန်မာဆိုင်က အိမ်ကို မပို့ဘူး ဆိုလို့ သိဒ္ဓိ လဲ သူ သွားယူပေးမည် လို့ ပြောလိုက် သည် ..။ ထမင်းစားခန်းထဲမှာ နီးနီးကပ်ကပ် တွေ့ကြသောအခါ သိဒ္ဓိ သည် စွင့်ကားသော တင်စိုင်တွေ ရဲ့ တုန်ခါမှုကို အနီးကပ် မြင်တွေ့နေရသော အခါ စိတ်တွေ ဖေါက်ပြန်နိုးကြွနေ သည် ..။
အဖေ က သူ အင်္ဂလန် ကို အလုပ်ကိစ္စ နဲ့ သုံးလေးရက်လောက် သွားရမည် လို့ ပြော သည် ..။ ဒီမှာကလဲ အလုပ်များနေတာကြောင့် မာယာ နဲ့ သိဒ္ဓိ နဲ့ တာဝန်ယူ လုပ်ကြဖို့ ပြော သည် ..။ သူ့အဖေ အလစ် သူ့ကို အဓိပ္ပါယ်ပါတဲ့ မျက်လုံးအစုံနဲ့ စိုက်ကြည့်လိုက်သော မာယာ့ကြောင့် သူ တော်တော် ခြေက်ခြားသွား သည် ..။ သူ့အဖေ သွားရင် မာယာ နဲ့ သူ လွန်လွန်ကျူးကျူးတွေတော့ ဖြစ်ကုန်တော့မည် ..။ နောက်တနေ့ သူတို့ ရုံးခန်း ကို ရောက်သောအခါ ချိုချိုအောင်ဆွေ က လူအလစ် မှာ သူ့နားကပ်လာပြီး..ကိုသိတ်..မတွေ့ရတာ ကြာပြီကွာ ..ကိုသိတ် ကို အရမ်းလွမ်းနေတယ် .. သိလား .. လို့ ပြောသွား သည် ..။ ချိုချိုအောင်ဆွေ နဲ့ သရီဆာ နေ့လည်စာ သွားစားကြချိန် ဦးပန်းအောင် ကလဲ အလုပ်ကိစ္စတခု နဲ့ အပြင်ထွက်ခိုက် မာယာ သည် သိဒ္ဓိ ဆီကို ရောက်လာ သည် ..။ “ ကိုသိတ် ..ကိုကြီး အင်္ဂလန် သွားတဲ့အခါ မာယာ နဲ့ ကိုသိတ် ပင်လယ်မြို့လေး က အိမ်ကို သွားကြမလားဟင် ..” “ မကောင်းဘူးထင်တယ် မာယာ ..ကျနော်တို့ ရပ်တန်းက ရပ်လိုက်ကြရင် ကောင်းမယ် …” “ ကိုသိတ် စိတ်ထဲ မာယာ နဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဘာတွေ ဖြစ်နေလဲ မာယာ သိနေတယ် ..သိနေခဲ့တာကြာပြီ . .” “ မဖြစ်သင့်ဘူးထင်တာဘဲ မာယာ ..ဒီလိုဘဲ နေလိုက်ကြပါစို့ …” “ ကိုသိတ် နဲ့ ဒို့ လွတ်လွတ်လပ်လပ် တွေ့ချင်နေမိတယ် …” “ မဖြစ်ဘူး မာယာ ..ကျနော်တို့ သိပ်နီးနီးကပ်ကပ် မနေသင့်တော့ဘူး ..” “ ဘာလို့လဲ ..ကိုသိတ်..မာယာ့ကို အမြဲ ခိုးခိုးကြည့်နေတတ်တာ မာယာ သတိထားမိနေတယ် ..မာယာ လဲ…” “ တော်တော့ မာယာ ..မပြောပါနဲ့တော့ ..” သူ ရုံးခန်းထဲက ထွက်ခဲ့လိုက် သည် ..။
မာယာ ရဲ့ စူးစိုက်ပြီး ကြည့်တဲ့မျက်လုံးတွေ ကို သူ ရင်မဆိုင်ရဲ ..။ ဒီကိစ္စ အဖေ သိရင် သူ့ကို တသက်လုံး မုန်းတီး သွားမယ်လို့ သူထင်နေ သည် ။ အဖေ အင်္ဂလန် ကို ထွက်သွားသော နေ့တွင် သူ မာယာ နဲ့ အိမ်ကြီးတလုံး ထဲ အတူတူ နေဖို့ကို ဝန်လေးနေ သည် ..။ သူ့စိတ်တွေ ကို သူမနိုင်ဘူး ဆိုတာ သူ သိနေလို့ ..။ မာယာထွန်းနောင် ရေချိုးခန်းထဲ ရောက်သောအခါ ရင်လျားထားတဲ့ ထမိန်ကို ချွတ်ချလိုက် သည် ..။ နံရံ တခုလုံး အပြည့် မှန်ကြီးမှာ မြင်နေရ တဲ့ သူမ ရဲ့ ဝတ်လစ်စလစ် ကိုယ်ခန္ဓာ ကို သေသေချာချာ ကြည့်လိုက် သည် ..။ သည် ကိုယ်လုံး ဒီအလှအပတွေကို ဆန့်ကျင်ဖက် ဖိုသတ္တဝါတွေ တပ်မက်လိုက်ကြတာ အရမ်းဘဲ ..။ သူမ အပျိုဖေါ်ဝင်စကထဲ က ယောင်္ကျားတွေ ရဲ့ တပ်မက်တဲ့ မျက်လုံးတွေ နဲ့ အာသာတငန်းငန်း ကြည့်ကြ တာ ကြုံခဲ့ရ သည် ..။ ထူးထူးခြားခြား လှနေတဲ့ ရင်သားတွေ နဲ့ တင်ပါးတွေ ကြောင့် သူမကို စွဲလန်းတပ်မက်သူတွေ တပုံကြီး ကြုံခဲ့ သည် ..။ ဆေးကျောင်းသူ ဘဝမှာ တော့ ပြောဖို့လိုမယ် မထင် ..။ အလှဆုံး အချိန် မှာ ကြိုက်တဲ့လူတွေ ဝိုင်းဝိုင်းလည်နေခဲ့ သည် ..။ ကျောင်းသားတွေ ရော ဆရာတွေ ရော…မိန်းမချင်းတွေ ရော …။ မာယာ သည် အရွေးရခက်ပြီး ဆရာဝန်ဖြစ်လာတဲ့အထိ ရီးစား မရှိခဲ့ ..။ ရေပန်းကို ဖွင့်လိုက် သည် ..။ မှန်ထဲမှာ သူမ ပေါင်ကြားက ဖေါင်းမို့တဲ့ ဆီးခုံကြီး မှာ အမွှေးတွေ နဲနဲ ထူလာရှည်လာသည် လို့ ထင် သည် ..။ နဲနဲ ပါးလိုက်အုံးမှ ..။ ကိုကြီး သည် တခါတလေ သူမကို ယက်တတ် သည် ..။
ခုတလော ကိုကြီး သူမကို လိင်မဆက်ဆံတာ ကြာပြီ ..။ အလုပ်များ လို့လား မသိဘူး ..။ ဟိုတခါက သူ စိတ်တွေ ပြင်းထန်နေပြီး သူမကို လုပ်ချင်တဲ့အချိန် သူမ ကလဲ ရာသီသွေးပေါ်နေ သည် ..။ ကိုကြီး ရဲ့ အတန် ကြီးကလဲ တအားမတ်ထောင်နေတော့ ကိုကြီး ကို ပါးစပ်နဲ့ဘဲ လုပ်ပေးခဲ့ရ သည် ..။ မာယာ စုတ်တာ ကို ကိုကြီး သဘောကျ သည် ..။ သူတို့ ဟန်းနီးမွန်း ထွက်တုံးက ဆို ကိုကြီး ကို ကရစ်ဘီယန်က ကျွန်းတကျွန်း က တဲလေးထဲမှာ တနေ့လုံး အချစ်စခန်းဖွင့်ကြတော့ သူမ ရေရေလည်လည် စုတ်ပေးခဲ့ဘူး သည် ..။ ကိုကြီး သည် သူမ ပါးစပ်ထဲမှာ အကြိမ်ကြိမ် ပြီးရ သည် ..။ မနက်ဖန် ကိုကြီး အင်္ဂလန် သွားမည် ..။ ဒီနေ့ညများ ကိုကြီး သူမကို ချစ်မလားမသိဘူး လို့ တွေးနေ သည် ..။ ဟိုတနေ့က ကိုသိတ် နဲ့ နမ်းမိကြ သည် ..။ဘာလို့မှန်းမသိ ..။ ကိုကြီး မတိုင်ခင်ကလဲ ဘယ်သူနဲ့မှ မကြိုက်ခဲ့ဘဲ ကိုကြီးနဲ့ကျမှ အပျိုဘ၀ ကို စွန့်လွှတ်ခဲ့သော သူမ သည် ကိုကြီးကို သစ္စာရှိရှိ နဲ့ နေခဲ့ပေမဲ့ ကိုသိတ် ကို ကျတော့ မာယာ စိတ်မထိန်းနိုင်ခဲ့ဘူး ..။ ကိုသိတ် ဘာကို လိုချင်နေသလဲ ဆိုတာလဲ မာယာ သိ နေသည် ..။ မာယာ့ကို သူ တပ်မက်တဲ့ စိတ်တွေ များနေပြီး မာယာ နဲ့ အိပ်ချင်နေတာကို စိတ်ထိန်းချုပ်ထားနေရပုံဘဲ ..။ မာယာ လဲ သူများ စလာ လေမလားလို့ စောင့်နေပေမဲ့ သူ့ဖက် က တိုးမလာဘူး ..။ မပြတ်မသား ဖြစ်နေသည် ..။ မာယာ လဲ သူ့ကို ပြန်ချောင်းမြောင်းနေမိ သည် ..။
သူ ပင်လယ်မြို့ကလေး မှာ မာယာ နဲ့ ကိုကြီး လုပ်ကြတာကို လာချောင်းတော့ မာယာ စိတ်တွေ တအား လှုပ်ရှားခဲ့ သည် ..။ ချိုချိုအောင်ဆွေ နဲ့ သူ လုပ်ကြတာကို မာယာ ပြန်ချောင်း သည် ..။ သူ့ရဲ့ အောင်မြင်တဲ့ လိင်တန်ချောင်းကြီး ကို မာယာ တွေ့ဘူးခဲ့ရ သည် ..။ သူ့အဖေလိုဘဲ လိင်တန် ထွားသော သူ့ကို မာယာ တပ်မက်မိလာခဲ့ရ သည် ..။ အဲဒီနေ့ကတော့ လူမရှိတဲ့ ရောင်းမဲ့ အိမ်ကြီးထဲမှာ သူနဲ့ နမ်းဖြစ်ကြ သည် ..။ သူ့ပေါင်ကြားက မာနေတဲ့ လိင်တန် ကို ဘောင်းဘီအပေါ်ကနေ မာယာ ပွတ်သပ်မိ သည် ..။ နှုတ်ခမ်းချင်း နမ်းစုတ် လျာချင်းပွတ်လှိမ့် နေချိန် သူကလဲ မာယာ့ တင်သားစိုင်တွေကို ပယ်ပယ်နယ်နယ် ဘဲ ဆုတ်ကိုင် သည် ..။ မာယာ အဲဒီနေ့က သူ မလာခင် မာယာ့ ပင်တီ ကို ချွတ်ထားခဲ့ သည် ..။ အိုး ..ဒါတွေ ပြန်မြင်ယောင်စဉ်းစားတော့ မာယာ သွေးတွေ ဆူဝေလာ သည် ..။ ကိုသိတ် ကို မြင်ယောင်လာ သည် ..။ သူလဲ သူ့အဖေလိုဘဲ မာယာ့ကို ယက်ပေး မှာဘဲလား …။ ကိုသိတ်ရဲ့ လိင်တန်ချောင်းကြီး နဲ့ ကြုံချင်တွေ့ချင်မိ သည် ..။ စိတ်တွေ က ဖေါက်ပြန်နိုးကြွနေ သည် ..။ ရေပန်းအောက် ထဲ ဝင်ပြီး ရေချိုးလိုက် သည် ..။ လက် က အလိုလို ပေါင်ကြားက မိမိရဲ့ အကွဲကြောင်းဆီကို ရောက်သွားရ သည် ..။ ဟင်း ….သူမအင်္ဂါစပ် သည် လိုလားတောင့်တနေ သည် ..။ ဟိုး အတွင်းထဲက ယားယံနေ သည် ..။ အင်္ဂါစပ် နှုတ်ခမ်းသား ထူထူလေးတွေ ကို သူမလက်ချောင်းတွေက စမ်းကိုင်နေရင်း ပွတ်မိလာ သည် ..။ ဆပ်ပြာ နဲ့ အင်္ဂါစပ်ကို သေချာစွာ ပွတ်သပ် ဆေးကြောမိ သည် ..။
သူမ ရေချိုးပြီးတော့ အိပ်ခန်းထဲကို ပြန်ထွက်လာသောအခါ သူမကို ကုတင်ပေါ်မှာ ပက်လက်ကြီး စောင့်နေသော ဦးပန်းအောင် ကို တွေ့လိုက်ရ သည် ..။ ဦးပန်းအောင် သည် ကိုယ်တုံးလုံးကြီး နဲ့ ပေါင်ကြားက လိင်တန်ချောင်းကြီး က အကြောတွေ ထောင်ထပြီး တောင်မတ်နေ သည် ..။ မာယာ ကြည့်လိုက်သော အချိန်မှာ သူ့လိင်တန်ကြီး သည် ဆတ်ကနဲ လှုပ်သွားတာ တွေ့လိုက်ရ သည် ။ “ အို..ကိုကြီး..မာယာ့ကို စောင့်နေတာလား ..လာပြီ..လာပြီ …” မာယာ သည် ဦးပန်းအောင် ဆီကို အပြေးကလေး ရောက်လာ သည် ..။ “ အို ..ကိုကြီး …မာတောင်နေလိုက်တာကွာ..မာယာ လျော့ပေးမယ် နော် ..ကိုကြီး ..” ဦးပန်းအောင် သည် မာယာ့ကို ကြည့်ပြီး..“ မာယာ ..ထမိန်ချွတ်လိုက်ကွယ် ..”လို့ ပြောရင်း သူ့လိင်တန်ကြီး ရဲ့ ထိပ်ပိုင်း ကို ပွတ်သပ်နေ သည် ။ မာယာ လဲ ရင်လျားလာတဲ့ ထမိန်ကို ဖြေချွတ်ချလိုက် သည် ..။ ဖြူဖွေး အချိုးကျတဲ့ မာယာ့ကို ကြည့်ပြီး ဦးပန်းအောင် သဘောကျကျေနပ် နေ စဉ် မာယာ လဲ ကုတင်ပေါ်တက်ခါ လိင်တန်ကြီးကို အရင်း ကနေ ဆုတ်ကိုင်ပြီး သူမပါးစပ်လေး နဲ့ ငုံစုတ်လိုက်ပါတော့ သည်။။ မူရင်းတင်သူအားခရက်ဒစ်ပေးပါသည်။
ၾကီးတာေသး တာ အေရး မၾကီးပါ ဘူးေမာင္